तपाइको ल्यापटप/कम्प्युटर स्लो छ ? यी १० तरिका प्रयोग गरि कम्प्युटरको स्पिड बढाउनुस - IAUA
तपाइको ल्यापटप/कम्प्युटर स्लो छ ? यी १० तरिका प्रयोग गरि कम्प्युटरको स्पिड बढाउनुस
ramkrishna October 20, 2017	तपाइको ल्यापटप/कम्प्युटर स्लो छ ? यी १० तरिका प्रयोग गरि कम्प्युटरको स्पिड बढाउनुस
विज्ञान प्रविधिको तीब्र विकाससँगै कम्प्युटरको प्रयोग अहिले अपरिहार्य भइसकेको छ । कोठामा रहने कम्प्युटरबाट अहिले हात हातमा ल्याप्टप पुगिसकेका छन् ।
Previous Previous post: कम्प्युटर ढिलो स्टार्ट हुन्छ ? यसो गर्नुस्
Next Next post: चर्चित भारतीय गायिका-डान्सर हर्षिता दहियाको गोली हानि हत्या